Leenjiin hoggansaa milkaa’aa ture -obbo Admaasuu Daamxoo – Fana Broadcasting Corporate
Leenjiin hoggansaa milkaa’aa ture -obbo Admaasuu Daamxoo
Finfinnee, Hagayya 7,2011 (FBC) – Leenjiin hoggansa sadarkaa naannorraa hanga gandaatti jiraniif kenname milkaa’aa ture jedhan hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxon ibsa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetif laataniin.
Hoggansa naannoo amma aanaatti (leenjii leenjiftootaa dabalatee) kennameen hoggansi kumni 20 wirtuuwwan Adaamaa fi Jimmaatti leenji’eera jedhaniiru.
Leenjii hoggansaa marsaa gara garaatin guyyoota 15f kennamaa ture kanaan godinaalee 20, magaaloota gurguddoo naannoof waamaman 19, aanolee 323 (magaaloota sadarkaa aaanaatti ilaalaman 33 dabalatee),
gandoota 7,266 keessatti kennameera.
Kanaanis hoggantoota gandaa kuma 60tti siiqaniif leenjichi qaqqabeera jedhan obbo Admaasuu Daamxon.
Akka waliigalaatti hooggansa sadarkaa naannoo amma gandaa jiran kuma 80tti siiqantu leenji’e.
Obbo Admaasuun akka ibsanitti leenjichi;
Hoggansi haala beekee akka hogganu deeggareera,
Hoggansi gaggeessummaa guyyaa guyyaa kennu keessatti, amala jijjiiramaa, tarsiimoo fi tooftaa jijjiiramicha itti milkeessuu danda’u sirnaan akka hubatu gochuu,
Yaadaa fi gochaan tokkoomuun jijjiiramicha bu’aa caalutti ceesisuu,
Dandeettii, naamusaa fi qophaawummaa saffinni jijjiiramaa fi fedhiin ummataa gaafatu beekuun sadarkaa sanitti tarkaanfachuu danda’uudha jedhaniiru.
Leenjiin kun matadureewwan:-
1.Qabsoon Oromoo fi adeemsa jijjiiramaa,
2.Ijaarsa sirna federaalizimii sabdaneessaa,
3.Maalummaa hoggansa jijjiiramaa fi qabsoo misoomaa,
4.Dimokraasii fi nageenya,
6.Siyaas-dinagdee Gaanfa Afrikaa fi agarsiistuu isaa, dinaagdee Oromoo fi haala dinaagdee addunyaa fi gaggeessummaa siyaasaa)
Jijjiirama sadarkaa hundatti lafa qabsiisuu,
Fedhii fi faayiddaa hawaasaa sadarkaa ol’aanaan mirkaneessuu ,
Miira tajaajiltummaa gonfachuun rakkoo bulchiinsa gaarii furuu,
Hirmaannaa fi fayyadamummaa ummataa guddisuun ajandaawwan misoomaa, nageenyaa fi dimokiraasii milkeessuu,
Humna raawwachiisummaa mootuumaa fi paartii sadarkaa gandaatti cimsuun gaaffiiwwaan misoomaa, bulchiinsa gaarii fi kenniinsa tajaajilaa ummatni keenya qabu deebii waara’aa akka argatu gochuuf,
Hoggansa cimaa ta’e ijaaruun fedhii ummataa guutuun haaraoomsa lafa qabsiisuuf.
Oromiyaa keessattii nageenya amansiisaa buusuu,
Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuu,
Oromiyaa tasgabbii qabduu fi ijaarsa sirna dimokraasiitiif mijooftuu taate ijaaruuf tattaafii godhamaa jiru keessatti hoggansa gandaa gahee isaa sirnaan hubatee itti gaafatamummaa isaa si’ominaan bahatuu ijaaruudha.
Leenjichi milkaa’inaan xumuramee, bu’aa argame;
Huma guddaa fi kaka’uumsa cimaa kan uumeedha jedhaniiru hoggantichi.
Mootummaan sadarkaa irra jirus gadi fageenyaan kan ilaale ture, beekkumsa hin uumamin irraa bu’aan eegdu hin jiru waan ta’eef jedhaniiru.
Kanaaf hojii hoggansa uumuu, itti kennitee irraa fudhachuuti jedhan obbo Admaasuu Daamxon.
1.Hojii ol’aantummaa seeraa mirkaneessuu,
2.Miira ni dandeenya jedhuun hojii keessa galuu,
3.Gaggeessaa sadarkaa hundumaa biratti kaka’uumsa guddaa uumee jira.
4.Hariiroon ummataa fi mootummaa gidduu jiru akka cimuu fi waliin tumsan karra saaqee jira
5.Gaggeessaa Sadarkaa gara garaa giddutti tokkummaa fi wal hubannaa yaadaa fi gochaa uumee jira.
6.Hoggansi keenya maalummaa amala jijjiiramaa hubachuu isaatiin qormaatilee jijjiiramaan walqabatanii mudatan tooftaafi tarsiimoo ittiin hogganurratti hubannoon argate jira.
7.Hoggansi keenyaa aadaa siyaasaa biyya kanaa fi qabsoo ummata Oromoo keessa ture irratti hubannoo gahaa argachuun isaa boqonnaa irra jiru keessatti siyaasni Oromoo tooftaafi tarsiimoo akkamiitiin hogganamuu akka qabu irratti beekumsa akka argatu taasiseera.
8.Dargaggoonni lakkoofsi isaanii guddaa ta’e aadaa siyaasaa qabsoo ummata Oromoo keessa kaleessaafi har’a jiru sirnaan hubachuun tooftaafi tarsiimoon qabsoo boqonnaa qabsoo irra geenye keessatti hordofamuu qabu tarkaanfataa ta’uu akka qaburratti waliigaluun humna mootummaa keenyaa ta’uu danda’aniiru jedhan.
Icitiin milkaa’inaa gaggeessaan jijjiirama itti fufsiisuun fayyadamummaa hawaasaa sadarkaa ol’aanaan mirkaneessuuf qophaawummaa fi fedhii cimaa qabaachuu isaati kan jedhan hoggantichi, dubdeebiiwwan argamanis tarreessaniiru.
Leenjii yeroo isaa eeggate tahuu isaa.
Keessattuu dhaqqabummaa tajaajila mootummaa ummataan bira gahuurratti human dabalataa kan uume tahuu isaa.
Hojii beekkomsarratti hundaawe hoojjechuu fi bu’aan madaalaa deemuu akkaataa dandeessisuun kennamuu isaa.
Fedhii hawaasaa giddu galeessa kan godhatee fi hariiroo ummataa fi mootummaa caalatti cimsuu kan danda’u ta’uu isaa ibsaniiru.
Hojiin itti aanu;
Hojii qabatamaa keessa galuun ummata hirmaachisaa bu’aa galmeessisuu
Hojiin hoojjetamu hundi bu’aa buuseen madaalamaa deema.
Ummanni itti quufinsaa fi komiin qabu sakatta’amaa tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamaa deema.
Ummanni keenya gaggeessaa isaa ofitti qabee qajeelchuun jijjiiramaaf waliin tumsuu qaba.
Waan badees dafee eeruu kennaa akka sirratu gochuu qabaan dhaamaniiru.
Miseensonni WBO hidhannoo hiikkatanii leenjiirra turan 256…
Beekamtii waajjirichaatin ala qaamolee socho’an irraa…
Walga’iin koree hojii raawwachiiftuu ADWUI gaggeeffamuu…
Israa’eel Gaazaa irratti haleellaa haaraa gaggeesite